Kitapo solosaina ho an'ny Android | Androidsis
Ho an'ireo izay tia solosaina na tontolon'ny haitao amin'ny ankapobeny, dia manana sary sokitra tsara azo ampiasaina izahay. Misaotra azy ireo, azo atao ny mahita ny sary mahaliana indrindra izay manova ny fisehon'ny finday Android-nao amin'ny fotoana rehetra.
Ho azonao atao ny mahita ny vola manokana indrindra ao anatin'ity sokajy solosaina ity eto amin'ity galeriana eto ambany ity. Izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny smartphone sy amin'ny takelaka Android amin'ny fomba tsotra.
Sintomy mora foana ny tsara indrindra rindrambaiko solosaina sy haitao handravahana ny terminal Android anao.
Raha tianao ny teknolojia ary efa maniry bebe kokoa ianao, eto dia manana bebe kokoa sary mihetsika finday azonao apetraka amin'ny smartphone na tablette-nao.